Apple wuxuu lumiyay xuquuq gaar ah oo uu ku isticmaali jiray sumadda iPhone-ka ee Shiinaha | Wararka IPhone
Apple wuxuu lumiyay xuquuq gaar ah oo uu ku isticmaali jiray sumadda iPhone-ka ee Shiinaha
Markasta oo shirkaddu rabto inay suuq ka furato waddan, ugu horreyntii waa inaad diiwaangelisaa astaanta qalabkaaga / alaabtaada si aysan dhibaato kaaga haysanin markay tahay iibintooda. Markii hore, waxay ku dhacday Apple ee Mexico oo leh iPhone iyo Shiinaha oo leh iPad, kaas oo ay hore u diiwaangeliyeen shirkado kale oo ku qasbay wiilasha ku saleysan Cupertino inay soo saaraan buugga hubinta si ay u gaaraan heshiis u oggolaanaya iyaga inay sameeyaan isticmaalkeeda. Calaamadda. Laakiin Apple waxay la kulantay dhibaato kale, mar labaad Shiinaha, oo leh kiis sameeye taleefannada casriga ah.
Maxkamadda sare ee Shiinaha ayaa diiday rafcaanka ay Apple soo bandhigtay ka hor xukunka maxkamadda iyadoo meesha ka saartay sababta loogu talagalay isticmaalka astaanta iPhone si gaar ah, sumad ay horay u diiwaan galisay shirkadda Xintong Tiandi, oo ah soo saaraha kiisaska taleefannada casriga ah. Kiisaskaas waxaa lagu xardhay magaca IPHONE. Laakiin kaliya ma soo saarto kiisaska taleefannada casriga ah laakiin sidoo kale waxay soo saartaa daboolida baasaboorka iyo sidoo kale qalabka kombiyuutarka.
Xintong Tiandi wuxuu ka diiwaangashan yahay astaanta ganacsiga Shiinaha sanadkii 2007, isla sanadkaas oo ay shirkadda Apple soo saartay iPhone-ka Mareykanka. Si kastaba ha noqotee, Apple waxay ku qaadatay shan sano inay ku diiwaangeliso astaanta ganacsiga Shiinaha, 2012, inay awood u leedahay inay iibiso aaladaha mobilada iyo waxyaabaha kombiyuutarka. Tani waa sababta ugu weyn ee kaliya ee Apple u racfaan ka qaadatay go'aanka garsooraha, oo la laalay.
Sannadkii 2013, dawladda Shiinaha ayaa sidaa sheegtay Apple ma cadeyn karin in magaca iPhone la yaqaanay kahor shirkadda Xintong Tiandi ka diiwaangeli dalka. Apple ayaa racfaan ka qaadatay, iyadoo sheegtay in alaabooyinkani ay jahwareer ku abuuri karaan dadka isticmaala shirkadda iyagoo aaminsan in kiisaska iyo / ama alaabada kumbuyuutar ee ay soo saarto ay ka yimaadeen shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino.
Apple waxay xiriir adag la yeelatay dowladda Shiinaha imaatinkiisa. Sannadkii 2012, waxay ahayd inuu bixiyo $ 60 milyan si uu ugu isticmaalo magaca iPad-ka. Bishii la soo dhaafay waxay arkeen Maamulka Gobolka ee Saxaafadda, Daabacaadda, Raadiyaha, Filimada iyo Telefishanka inay xireen iTunes Movies iyo iBooks iyadoon la sharraxin sababta go'aankan, laakiin waxaa iska cad in faaf-reebka adag ee dalku ka gudbay rullaluistarka labada dukaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Apple wuxuu lumiyay xuquuq gaar ah oo uu ku isticmaali jiray sumadda iPhone-ka ee Shiinaha
Yoky Matsuoka, oo ah aasaasaha Google X iyo khabiir ku takhasusay aaladaha, ayaa ku biiraya kooxda Apple
Apple waxay soo bandhigeysaa Apple Music badan oo dareen leh WWDC